Kiimikooyinka Jeermiska Sifa ee loo yaqaan 'Sodium Dichloroisocyanurate SDIC CAS' warshad iyo soosaarayaal | Guanlang
Dhexdhexaad dabiici ah
Dhexdhexaadinta Sunta cayayaanka
Kiimikooyinka Maalinlaha ah
Dawooyinka jeermiska dila iyo kuwa jeermiska dila
Qalabka ceyriin ee xoolaha
Fasalka qurxinta GSH l-Glutathione / lglutathione Powde ...
Daawashada Products Shiinaha Tayada Sare Miisaanka Loss Pow ...
Kiimikooyinka jeermiska lagu dilo ee Sodium Dichloroisocyanurate S ...
99% daahir ah Phmg Polyhexamethylene Guanidine Hydrochl ...
Tayo sare leh Valerophenone CAS 1009-14-9 oo ka timid Shiinaha ...
Saldhigga Procaine / Procaine Base CAS 59-46-1 fasal tijaabo ah oo bilaash ah ...
Bixinta badbaadada Phenacetin budada kareemka, budada dhalaalaysa ...
Waxyeelada Boric Acid ee CAS 11113-50-1 iibinta kulul
Daawooyinka caafimaadka xoolaha Tetramisole hydrochloride cas 5086 -...
Kiimikooyinka Jeermiska Soodhiyam Dichloroisocyanurate SDIC CAS 2893-78-9
Sodium Dichloroisocyanurate Faahfaahin
Magaca badeecada: Sodium Dichloroisocyanurate
CAS Maya: 2893-78-9
EINECS Maya: 220-767-7
Qaaciddada Molecular: C3Cl2N3NaO3
Miisaanka Molecular: 219.95
Muuqaalka: Budada cad / granule / kiniinno
Soo-saare: Kooxda Guanlang
Xaaladda saamiga: Kujira
Gaarsiinta: 3 maalmood oo shaqo gudahood
Habka Dhoofinta: Xawaare, Bad, Cirka, Khad gaar ah
Sodium Dichloroisocyanurate faahfaahinta (50% kiniinno)
PH (1% xal biyo ah)
Sodium Dichloroisocyanurate Muuqaal:
Sodium Dichloroisocyanurate SDIC waa nooc jeermiska dilaa ah. SDIC waxay leedahay waxqabad sare iyo waxqabad joogto ah wax dhibaato ahna uma laha aadanaha. Waxay ku raaxeysaneysaa sumcad wanaagsan gudaha iyo dibaddaba.
Sdic waxay leedahay saddex nooc: budo, granule iyo kiniinno.
Ku saabsan kiniiniyada, waa culeys kala duwan halkii garaam, 1-3.3g / kiniin, 3.4g / kiniin ama u habeey si waafaqsan macaamilka. SDIC badanaa waxaa lagu buuxiyaa 50kg durbaan, waxay caan ku tahay EU, gaar ahaan kiniiniyada SDIC. Ka sareeya 95% macaamilka naga iibsada jeermiska inaga. Waxaa lagu keydiyaa meel qalalan oo hawo leh. La xiriiri maayo nitride iyo arrin hoos u dhac ah. Waxaa qaadi kara tareenno, gawaari waaweyn ama maraakiib.
Ka sokow, SDIC waxay leedahay adeegsiyo aad u tiro badan. Maaddaama jeermiska aan sunta lahayn, waxaa loo isticmaalaa nadaafadda iyo xakamaynta cudurrada, daaweynta caafimaadka, beeraha iyo ilaalinta dhirta iwm, tusaale ahaan, daawada loo yaqaan 'antisepsis' ee biyaha la cabbo, biyaha warshadaha, saxanka weelka, barkadda dabaasha, digaagga, quudinta kalluunka, deegaanka iyo cudurrada faafa iyo ka hortaggiisa. Intaas waxaa sii dheer, waxaa loo isticmaalaa in lagu caddeeyo maro, lagu dilo alga iyo dhogorta wakiilka caddaynta yaraynta. sdic khatar kuma ahan jirka bini'aadamka sidaa darteed waa lagu soo dhaweynayaa suuqa.
SDIC Baakadaha iyo Shixnadda
Xirxirida: 50Kg bac / durbaan
Rarista: 7-15 maalmood amarro waaweyn
SDIC dalab muunad
Hore: 99% Nadiif ah Phmg Polyhexamethylene Guanidine Hydrochloride Cas Maya.: 57028-96-3
Xiga: Alaabooyinka Kala-baxa ah ee Shiinaha Mashiinka Miisaanka Tayada Sare ee 99% Orlistat CAS 96829-58-2
Kiimikooyinka jeermiska dila
99% daahir ah Phmg Polyhexamethylene Guanidine Hyd ...
Daawooyinka caafimaadka xoolaha Tetramisole hydrochloride cas ...
No.66 Yuhua West Road, Degmada Qiaoxi, Shijiazhuang, Shiinaha
Right Xuquuqda daabacaadda - 2010-2022: Dhammaan Xuquuqda Ayaa Leedahay.
Xitaa haddii ay jiraan khataro, maqaarka oo caddeeya i ...
Muuqaalka Guud ee Boric Acid